Sterling Steady as Traders See Conservative Majority After Election | Myanmar Business Today
Home Business International Sterling Steady as Traders See Conservative Majority After Election
Pound Sterling notes and change are seen insideacash resgister inacoffee shop in Manchester, Britain, Septem,ber 21, 2018.
Olga Cotaga (REUTERS)
Sterling kept within its recent trading range on Thursday but this week could prove its second best so far this month as expectations that the Conservative Party may winamajority in the Dec. 12 national election fuel investors’ optimism.
The currency remained unmoved by weaker-than-expected British retail sales, which rose 3.1% year-on-year in October. Economists polled by Reuters were expectinga3.7% increase.
စ‌တာလင်ငွေဈေးနှုန်းသည် ယခုသီတင်းပတ် ကြာသပတေးနေ့တွင် ဈေးနှုန်းအတက်အကျငြိမ်နေသည်။ သို့သော် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် Conservative Party က အနိုင်ရနိုင်သည်ဟူသော ခန့်မှန်းချက်များက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အကောင်းမြင်မှုကို မြင့်တက်စေခဲ့သောကြောင့် ယခုလအတွင်း ဒုတိယ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်နေသည်။
မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်ခဲ့သော စစ်တမ်းအရ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ၏ Conservative ပါတီသည် အတိုက်အခံ Labour Party နှင့် ယှဥ်လျက် ၁၀ မှတ်မျှ အသာစီးရနေသည်။
မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲ ခရီးစဥ်အတွင်းတွင် Johnson က ယခုပေါ်ပေါက်နေသော နိုင်ငံရေးအကြပ်ရိုက်မှုများသည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် သက်ရောက်မှု‌ရှိနေပြီး အကယ်၍ သူသာ ‌ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါက Brexit နှင့် ပတ်သက်၍ မရေမရာဖြစ်နေမှုများကို အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပေးခဲ့သည်။
Tesla ၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Elon Musk ကတော့ Brexit သည် အန္တရာယ်အလွန်များသောကြောင့် ဗြိတိန်တွင် စက်ရုံ အသစ်မဆောက်ဘဲ ဂျာမနီနိုင်ငံ ဘာလင်တွင်သာ လျှပ်စစ်မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံအသစ်ကို တည်ဆောက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပေါင်ငွေဈေးမှာ တစ်ပေါင်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ၂၈၅၄ ဒေါ်လာရှိနေပြီး ယူ‌ရိုငွေဈေးထက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၅ဒသမ၅၈ ပဲနိမျှ မြင့်မားနေသည်။
ခန့်မှန်းထားသည့်ထက် ကျဆင်းနေသော ဗြိတိသျှလက်လီရောင်း‌အားကြောင့် ငွေကြေးဈေးမှာ အတက်အကျမရှိဘဲ ဖြစ်နေသည်။ စီးပွားရေးပညာရှင်များက လက်လီရောင်းအား ၃ဒသမ၇ ရာခိုင်နှုန်း တက်မည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် ၃ဒသမ၁ ရာခိုင်နှုန်းသာ မြင့်တက်ခဲ့သည်။
SOURCEOlga Cotaga (REUTERS)
Previous articleAlibaba Goes Paperless for $13.4 Billion Listing In A First For Hong Kong: Source
Next articleEuropean Steel Leaders Seek Scrutiny Of Chinese British Steel Rescue